Dhaqamada Macalimiinta Iyo Saameya Ardayga! – WARSOOR
Macalimadd ayaa inanta ardayada ah ee gacanta ku haysay ka qaaday maqaska isla markaana timaheeda qaybo ka mid ah kaga jartay, laakiin ardayada ayaa si xoog badan qaylo oohin ah oo yaab leh ku dhuftay sidii iyadoo ay halis gashay. Ardaydii arkaysay ee dhinac fadhiyay ayaa dhamaantood si aad u xoog badan u qoslay.
Ardayada ayay maamulka dugsigu isugu yimaadeen markii ay aamusi weyday, waxaana macalimadda ficilkan kula kacday lagu ganaaxay $ 175 iyadoo ardayadana la raali geliyay. Macalimiinta ayaa kula kaca arimoo ciqaab ah ardayga kuwaasi oo ku keena ardayga in mararaka qaarkood u dugsiga iskaga baxo oo niyada jabo. Ardayada ayaa codsatay in laga bedelo fasalkaasi iyadoo dareemaysa xaqiraad iyo sidii jeesjeeska ahayd ee ay ugu qosleen ardayda fasalkeedu.